IoT ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Tuya Intelligent က အႀကီးအက်ယ္ အလုပ္ – Pandaily
IoT ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Tuya Intelligent က အႀကီးအက်ယ္ အလုပ္
Feb 25, 2022, 17:40ညနေ 2022/02/25 23:21:19 Pandaily
အရာ များ၏ အင်တာနက် (IoT) စမတ် ထုတ်ကုန် ဖြေရှင်းချက် ပေး သူ Tuya Intelligent သည် စတင် နေပြီ ဖြစ်သည်ပြီးခဲ့သည့် နှစ် မှစ၍ ရာနှင့်ချီ သော ၀ န်ထမ်း များပါ ၀ င်သော အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်း. Tuya Smart ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ေယာက္က ေသာၾကာေန႔က တုန္႔ျပန္ ခဲ့ပါတယ္-“ ဒီ သတင္းက မွားယြင္း ေနၿပီး ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ အလုပ္ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး သည်ပုံမှန် တိုးတက် နေပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ပေါ်လစီ သည် ကုမ္ပဏီ၏ မဟာဗျူဟာ နှင့်အညီ အလားအလာရှိသော အသင်း များ နှင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုခိုင်မာ စေလိမ့်မည်။ ရာထူး များစွာသည် ကမ္ဘာကြီး အတွက် ပွင့်လင်း ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအား အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုဆက်လက် ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထူးခြၽန္ တဲ့သူေတြ က်ေနာ္ တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ဖို႔ ႀကိဳဆို ပါတယ္ “ လို႔ ေျပာပါတယ္။
Tuya Intelligent သည် ၀ န်ထမ်း ၂၅၀၀ မှ ၃၀၀၀ အထိသာ ထားရှိ မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၅၀၀ မှ ၇၀၀ အထိကို အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ၏ “ ၃. ၅” စံသတ်မှတ်ချက် အောက်တွင် နှစ်စဉ် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိသော ၀ န်ထမ်းများသည် အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်းတွင်ပါ ၀ င် လိမ့်မည်ဟု ထို ပုဂ္ဂို လ်က ထောက်ပြသည်။ နှစ်စဉ် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသော ၀ န်ထမ်း အချို့သည် “ N + 1 layoffs” ကို လျှောက် ထားပြီး ကုမ္ပဏီ မှထွက်ခွာ နိုင်သည်။ ဤ အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်းသည် ရုတ်တရက် မစတင် ခဲ့ပါ။ အချို့သော ပြင်ပ အလုပ်သမား များနှင့် အလုပ်သင် များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်လယ် ပိုင်းတွင် အလုပ်ပြုတ် ခဲ့ရသည်။ ၀ န်ထမ်း အားလုံးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် လျော်ကြေး နှင့် နှစ်ကုန် အပို ဆုကြေး လျှော့ချ ခြင်းသည် အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်း၏ နောက်ထပ် လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်အပြုသဘော သတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် Tuya Intelligent ၏ ၀ န်ထမ်း များထံမှ ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ထမ်းများကို အမှန်တကယ် အလုပ် ထုတ်ပစ် ကြောင်း သိရှိ ခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် မှု စုစုပေါင်း ၃ ၈၀၀ ကျော်ရှိသည်။ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ က်န္ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားသလို အလုပ္သမား ေလွ်ာ့ခ် မႈက ၈၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ရွိ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၀ န်ထမ်း ကပြောကြားရာတွင် Tuya Intelligent ၏လည်ပတ် မှုနှုန်းသည် မြင့်မား နေ ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Tuya Intelligent သည် Tuya Technology မှ စတင်မိတ်ဆက် ပေးသော တစ်နေရာ တည်း တွင် စမတ် အိမ်တွင်း ဖြေရှင်းချက် ဝန်ဆောင်မှု application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဝေးထိန်း ထိန်းချုပ်မှု၊ ခလုတ် တစ်ချက် နှိပ် ခြင်း၊ စမတ် အချိန်ကိုက် သတိပေး ခြင်းနှင့် အိမ် မျှဝေ ခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထောက်ပံ့သည်။ စမတ္ဖုန္း နဲ႔ အိမ္ မွာရွိတဲ့ စမတ္ ထုတ္ကုန္ ေတြကို အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Tuya Smart သည် NYSE တွင် အောင်မြင်စွာ စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ Tuya သည်အမေရိကန် စတော့ ဈေးကွက် မှဒေါ်လာ ၉ ၁၅ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၁ Q3 ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ယခုနှစ် ပထမ သုံးလ ပတ်အတွင်း Tuya Smart ၏ ၀ င်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၇ သန်းမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၂၇ သန်းအထိ တိုးတက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၉၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ Tuya Intelligent Q1 နှင့် Q2 တို့၏ ၀ င်ငွေ တိုးတက် မှုနှုန်းသည် ၂၀၀% နှင့် ၁၁၈% အသီးသီးရှိသည်။
သို့သော် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု သည်ကြီးမားသော ဆုံးရှုံး မှုများနှင့် R & D ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များစွာရှိသည်။ ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ Tuya Intelligent သည် ၂၀၂၀ တွင် ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၁ ၇၉. ၉ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၇၀% တိုးလာပြီး အသားတင် အရှုံး မှာဒေါ်လာ ၆၆. ၉ ၁၂ သန်း ဖြစ်သည်။ 2019 ခုနှစ် တွင်၎င်း၏ ဝင်ငွေ $105.8 သန်းနှင့် အသားတင် အရှုံး $73.097 သန်း ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Tuya Intelligent သည်ဒေါ်လာ ၆၉. ၈ ၄၆ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့ပြီး လည်ပတ်မှု ဆုံးရှုံး မှုနှုန်းမှာ-38 ဖြစ်သည်။ ၈% ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၇၃. ၄၄ သန်း လည်ပတ်မှု အရှုံး နှင့်-69 လည်ပတ်မှု ဆုံးရှုံး မှုနှုန်း ။ ၄% ။
Industry Sep 16 စက်တင်ဘာ 16, 2021
Industry Sep 22 စက်တင်ဘာ 22, 2021
ECARX သည် 7nm high-end မော်တော်ကား ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်မှု ပြီးစီး ခဲ့ပြီး လာမည့် နှစ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ် ထားသည်
Geely မှ ပံ့ပိုး ထားသော ECARX နည်းပညာ ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် SiEngine နည်းပညာဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော 7nm smart cockpit chip DragonHawk 1 ကိုအောင်မြင်စွာ ဖြန့်ချိ ခဲ့ ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။